Debate on the Division of Revenue Amendment Bill 2017 by Hon . Ndabakayise Gcwabaza (ANC)
Hon.Ministres and Deputy Ministers
Lesisichibiyelo somthetho wesabelo zimali sika 2017 siyakubalula ukuthi inani lemali ekhona kuHulumeni oMkhulu lehlile ngenxa yokuthi izinga lokuthuthuka komnotho liphansi.
Kodwa uHulumeni kaKhongolose uyazinikezela ekusebenzeni ngokuzikhandla ukuze kuthuthuke izinga lomnotho,kwakhiwe imisebenzi futhi kunziwe ncono ukuqoqwa kwemali yentela.
Noma lesisimo sezimali singesihle uHulumeni wabele oHulumeni bezifundazwe kanye noHulumeni baseKhaya imali ezokwazi ukufezekisa izidingo zemiphakathi kulolonke izwe lakithi.
Imali eyabelwe oHulumeni baseKhaya yenyukile yaba ngaphezulu kwezigidini eziyikhulu neShumi nambili (R112,6 million).Lesisabelo esengeziwe sivuna abantu bakithi abangathathintweni.Siqinisekisa ukuthi kuqhubeke ukutholakala kwamanzi,ugesi,imigwaqo ehambekayo nezindawo zasekuhlaleni ezihlanzekile.
Kukhona nesabelo sezigidi ezingamakhulu amabili namashumi ayisithupha nanhlanu (R265 million) sokwakha izindlu zangasese ezinokuhlanzeka,ukuze kuqedwe ukuthuthwa kwendle ngamabhakede.
Omasipala bakwaZulu Natal banikezwe imali ecishe ifinyelele emashumini amabili nesishiyagalombili samarandi (R27,9 million) yesibonelelo sokushinthwa kwemincele yoMasipala kwango 2016.
UMasipala wase Merafong eGaunteng uzohlomula ngo R26,1 million wokulungisa ingqalasizinda eyoniwa yizikhukhula.
Kanti uMasipala wase Butterworth eMpuma Koloni wabelwe imali engamakhulu amabili (R200million) wokwakha ingqalalsizinda yamanzi .
Esikugcizelelayo siwuKhongolose ukuthi oMasipala abayisebenzise ngokucophelela lemali,bangayixhaphazi.Futhi kufanele kubonakale imiphumela emihle ngokuthi izidingo zabantu zibonakale zifinyelela kubona
Sithe uma sifakana imilomo nezinhlangano eziyikhathelelayo impilo yabantu ngesikhathi samaPublic Hearings, sathola ukuthi uyasekelwa loMthetho Sivivinyo wokuchibiyela isabelo zimali.Kuvelile futhi nokukhathazeka kwabantu ngesimo esiphansi sezimali kuHulumeni kanye nesomnotho jikelele.
Kodwa bayakuthakazela ukuthi uHulumeni ka Khongolose uyakuqinisekisa ukulethwa kwezidingo zabantu kakhulukazi koHulumeni basekhaya.
Kanti ngaso lesikhathi sokufakana imilomo,uMnyango WoHulumeni baseKhaya (Department of Local Govt) wethule uhlelo oluhle,ubambisene neminye iminyango kaHulumeni oMkhulu noHulumeni beziFundazwe, lokusiza Omasipala abantengantengayo ukuze kuqiniswe izinhlaka zokuphatha,kuqashwe abasebenzi abaqeqeshiwe,bese kuthuthukiswa nokuphathwa nokusetshenziswa kwezimali.
Nathi siwuKhongolose siyaweseka loMthetho Sivivinyo wokuchibiyela isabelo zimali ka 2017.
Sicela leNdlu kaZwelonke Yesishayamthetho iwamukele futhi iwugcobe ube nguMthetho osebenzayo.